Posts 12 · Viewed 1376 · Likes 10 · Go to Last Post
"नास्या र लोगन्याको काण्ड
Last edited: 20-Jan-21 06:52 AM
"This story smells of shit. Not believable at all."
हाम्रो प्यारो अवतारी अन्डूस भाइको सेक्स्क्पेड़ जस्तै हो … खाते ब्रो ? 🙄🤪🤣🙏
Last edited: 19-Jan-21 07:02 AM
"Euta grownup man who is already married will never sleep with another guy in the same bed."
बटरनट ब्रो … मलाइ पनि तेस्तै लागेर अस्ति मैले मेरो धुक्कुर कन्याउदै गरेको फोटो लोगनब्रोको एउटा धागोमा कुरै कुराको प्रसंगमा टालेको थिए … बजिया लोगन ब्रोले मेरो धुक्कुरे फोटो साझा भरि टाँसन भो ! अनि तेती मात्र होइन हाम्रा लोगनको बाजेले त् मेरो धुक्कुर नियाली नियाली दुइ इन्च सानो भो भन्न भो ! गे प्राइड ब्रो त् गे नै हुन् भइ हाल्न भो … तेसैले उंहाले मेरो माथिको पिक्चर आफ्नो प्रोफाइलमा हालेकोमा मलाइ केहि फरक परेन … अस्ति फेरी लोगनको बाजेले मेरो धुक्कुरको कुरा उठाउनु भाकोले रिसको झोकमा मेरो गेडाको पिक्चर खिचेर उन्हालाइ गिफ्ट नै देको थिए अनि तेही सुनौलो अवसरमा जो खाते बाइडेनलाइ नि ट्विटरमा पोस्ट गरिदेको मेरो गेडा दर्शन गरोस भनेर … साला खाते ट्विटरले वार्न गर्यो !
यी साला हाम्रा लोगन ब्रोको सबै गे खलक पर्न भो कि के हो ? भेना मात्र जाति हुनु हुन्छ होला … कि माथिको गे प्राइड ब्रोले गेडा चुसी दिने लोगन ब्रोको भेना नै त् पर्न भएँन ! होस् बेसी लोगन ब्रोको कुरा गर्दिन … अस्ति मन दुखाउन हुँदै … मलाइ शंका गर्दै … मैले पो उन्हाको आफन्तको अवतार धारण गरेको भनेर दोष लगाउनु भाको ! अन्त मैले नि खुल्ला पत्र नै लेख्न पर्यो ! तेसरी खुल्ला प्रेम पत्र त् खालि मैले मेरी प्राण पियारीज्युलाइ साझामा मात्र लेखेको थिए …कतै लोगन ब्रोले मैले उन्हालाइ माया गरि लेखेको प्रेम पत्र पढी म प्रति प्रेम जागेको त् होइन ? याँहा कोभिड लागेको बेला धुक्कुर सुन्नेको बेला, लोगन ब्रोले चाक थाप्न भयो भने त् …
अब हेर्दै गर्नुस है … एड्मिन्ज्युको आर्को धागो आउने छ … नासेले मेरो चाकमा नाक गाडदै छ भनेर ! 🤣
लोगन ब्रो … हल्का रमाइलो मात्र नि …एट योर एक्सपेन्स ल … 🙈🙏
मेरो त् एक जना निउ योर्कमा गे साथि नि थियो ! अनि निउ योर्कको एक पार्टीमा उसको बोइ फ्रेनलाइ आरिशे बनाउन मेरो साथिसंग गे डान्स गरि देको … बाफ रे बाफ उसको बोइ फ्रेन जेल्लो भएर एल्लो मात्र हुन् बाँकी थियो ! फ्लर्ट त् म केटि मात्र होइन गे होस् या ज्याक्सन हाइट्स / ठमेलका ट्रान्सजेन्डर होस् … सबैसंग मिठो बोलि दिन्छु ! 🙈
म यो धागोलाइ साझाको बेस्ट गे पोस्ट बनाउने कोशिश गर्ने छु ल ! हामिले साझामा गेप्राइड जस्तो ब्रो/ सीसहरुलाइ पनि अकामडेट गर्न पर्छ !
Last edited: 19-Jan-21 05:43 PM
Last edited: 19-Jan-21 07:54 PM
Last edited: 19-Jan-21 10:45 PM
· Snapshot 682
Last edited: 19-Jan-21 11:11 PM
Visitor is looking at Event: Roommate Needed
Visitor from DE is reading नया सम्झौता अनुसार मूल भट्ट ले मासिक १० लाख पारिश्रमिक पाउने
Visitor from GB is reading Chautari X
Visitor from CA is reading How many you all from Chitwan Living in USA
· Posts 1562 · Viewed 85644 · Likes 1654
· Posts 1747 · Viewed 250201 · Likes 886
· Posts2· Viewed 174
· Posts6· Viewed 1261 · Likes 1
· Posts 13 · Viewed 1535
· Posts 26 · Viewed 2727 · Likes 20